Career Advice Help & Support Personal Growth Upgrade Yourself
စှမျးရညျ အသဈတဈမြိုးကို ဘယျလိုသငျယူမလဲ
ယနခေ့တျေရဲ့ လငျြလငျြမွနျမွနျတိုးတကျနတေဲ့ ကမ်ဘာ့စီးပှားရေးမှာ အောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျ စှမျးရညျအသဈတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျသငျယူနိုငျစှမျးရှိဖို့က မရှိမဖွဈလိုအပျပါတယျ။ အခုဆိုရငျ လူတျောတျောမြားမြားက ကိုယျ့ဘဝတိုးတကျရေးရဲ့ လိုအပျခကျြကို နားလညျကွပွီး မိမိကိုယျကိုယျ ရောငျးကုနျတဈခုအနနေဲ့ လှယျလှယျကူကူရောငျးထှကျနိုငျစမေယျ့ စှမျးရညျတှတေညျဆောကျရေးမှာ သူတို့ရဲ့အခြိနျတှေ၊ ငှတှေကေို ရငျးနှီးမွှုပျနှံခွငျးဖွငျ့ သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတတှကေို အခြိနျနဲ့အမြှ အခကျြအလကျတှကေို ထပျထပျဖွညျ့ဖို့ အမွဲတမျးကွိုးပမျးနကွေပါတယျ။
ကှနျပြူတာပရိုဂရမျအသဈတဈခုကို သငျယူဖို့ကွိုးစားတာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးစှမျးရညျတှေ တိုးတကျဖို့လုပျဆောငျတာပဲဖွဈဖွဈ စှမျးရညျအသဈတဈခုကို ကြှမျးကငျြလာစမေယျ့နညျးလမျးတှကေို Wynee က အောကျပါအတိုငျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ကိုယျသငျယူခငျြတဲ့ စှမျးရညျဟာ အဖိုးတနျပွီး ရယူနိုငျတာဖွဈပါစေ။
ကိုယျ့အလုပျအတှကျ သငျ့လြျောပွီး ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျးက တနျဖိုးထားတဲ့ စှမျးရညျတဈခုကို ရှေးခယျြပါ။ ကိုယျ့ကိုယျ တနျဖိုးတကျစပွေီး အလုပျခှငျမှာ ပိုပွီးအကြိုးရှိစဖေို့ သငျယူဖို့လိုအပျတဲ့ စှမျးရညျတှကေို သိအောငျလုပျပါ။ ရယူနိုငျမယျ့ပနျးတိုငျကို ခမြှတျပါ။ သတျမှတျထားတဲ့အခြိနျအတိုငျးအတာအတှငျးမှာ ထိုစှမျးရညျကို တကယျသငျယူနိုငျမလား၊ အဲဒီအတှကျ အခြိနျတှေ၊ အငျအားတှပေေးနိုငျမလားဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မေးပါ။
၂။ ကွိုးစားခငျြစိတျရှိပွီး သငျယူခွငျးပျေါမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို စူးစိုကျပါ။
အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ သူတို့ရဲ့အခြိနျနဲ့ စှမျးအငျတှကေို လိုအပျတဲ့စှမျးရညျတှရေရှိဖို့အတှကျ လုပျဆောငျကွပါတယျ။ စညျးကမျးနဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုက စှမျးရညျအသဈတဈခုရရှိဖို့အတှကျ မရှိမဖွဈအရေးပါပါတယျ။ တီဗီရှမှေ့ာနဲ့ လူမှုကှနျရကျတှပေျေါမှာ အခြိနျကုနျဆုံးမယျ့အစား အခြိနျဇယားခပြွီး အဲဒီအတိုငျးလိုကျနာပါ။
၃။ ကိုယျ့အတှကျ အဓိပ်ပါယျရှိပါစေ။
ကိုယျ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ သငျယူမှုပုံစံက ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ အဓိပ်ပါယျဖျောနိုငျခွငျးက လူတှကေို နားလညျအောငျနဲ့ သငျယူနိုငျအောငျ ကူညီပေးတယျလို့ သုတသေနက ဆိုပါတယျ။ အလှတျကကျြမှတျလိုကျတာထကျ တကယျ့ဘဝနဲ့ ဆကျစပျကွညျ့ပွီး သဘောတရားတှကေ အကွောငျးအရာတှတေျောတျောမြားမြားနဲ့ ဘယျလိုကိုကျညီလဲဆိုတာ နားလညျပါ။ အကွောငျးအရာအသဈတဈခုကို သငျယူတဲ့အခါ ပိုပွီးစှဲမွဲစဖေို့ အရငျက ဗဟုသုတတှေ၊ ကိုယျပိုငျအတှအေ့ကွုံတှကေို ပွနျလညျအမှတျရပါ။
၄။ သေးငယျတဲ့အရာတှကေနေ စတငျပွီး စီမံခနျ့ခှဲနိုငျပါစေ။
စှမျးရညျအသဈတှအေမြားကွီးကို တဈခါတညျးသငျယူဖို့ကွိုးစားပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အလှနျအကြှံတှနျးအားပေးတယျဆိုရငျ ဝနျပိပွီး ပငျပနျးသှားနိုငျပါတယျ။ အခြိနျတဈခြိနျမှာ စှမျးရညျတဈခု၊ နှဈခုလောကျပဲ အာရုံစိုကျပွီး တဈခုစီကို ကိုယျလုပျနိုငျတဲ့ပနျးတိုငျလေးတှဖွေဈအောငျ သတျမှတျပါ။ စှမျးရညျတှကေို အနညျးဆုံးသငျယူနိုငျမယျ့အနအေထားတှအေထိ ပိုငျးခွားပွီး အခြိနျတဈခြိနျမှာ တဈခုနှုနျးနဲ့ သငျယူနိုငျအောငျလုပျပါ။ ကိုယျက ရှကေို့ ဆကျလကျတကျလှမျးနသေရှေ့ သေးငယျတဲ့အဆငျ့တှကေို လုပျဆောငျတာက အဆငျပွပေါတယျ။
၅။ တခွားသူတှကေို သငျပေးပါ။
တခွားသူတှေ သငျယူနိုငျဖို့ကူညီတာက ကိုယျ့ဘာသာ ကောငျးကောငျးသငျယူနိုငျဖို့အတှကျ အထောကျအကူပွုပါတယျ။ တခွားသူတှကေို သငျကွားပေးတာက ကိုယျ့အနနေဲ့ သငျထားပွီးသားအရာတှကေို ပွနျလညျအမှတျရပွီး လကေ့ငျြ့ဖို့အတှကျ အခှငျ့အရေးရစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ရဲ့အသငျးဖျောအသငျးဖကျတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို ကိုယျသငျယူထားတဲ့အရာတှေ ဝမြှေပေးနိုငျမယျ့အခှငျ့အလမျးတှရေအောငျယူပါ။
စှမျးရညျအသဈတဈခုကို တဈညတညျးနဲ့ သငျယူလို့မရပါဘူး။ စှမျးရညျတဈခုကို သငျယူဖို့ လတှကွောပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ စိတျရှညျပါ၊ ဇှဲရှိပါ။
၇။ ကိုယျ့ရဲ့ သငျယူခွငျးတှကေို အခြိနျကာလတဈခုထိလုပျဆောငျပါ။
လလေ့ာမှုတှအေရ အခြိနျကွာကွာလလေ့ာမှု၊ သို့မဟုတျ အခြိနျကာလတဈခုထိ သငျယူခွငျးကို လုပျဆောငျတာက အခြိနျတိုတိုလေးအတှငျးမှာ အမြားကွီးသငျယူတာထကျ ပိုကောငျးတဲ့ သငျယူခွငျးနညျးဖွဈပါတယျ။ အခြိနျကာလတဈခုထိ လကေ့ငျြ့မှုတှလေုပျတာက သငျယူတဲ့အခြိနျမှာ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အာရုံကွောကလာပျစညျးတှကွေားက အခြိတျအဆကျလေးတှကေို လှုံ့ဆျောပေးပွီး အခကျြအလကျတှအေမြားကွီးကို အကွာကွီးမှတျမိစပေါတယျ။ တဈရကျထဲမှာ နာရီပေါငျးမြားစှာ ထိုငျပွီးလလေ့ာမယျ့အစား အခြိနျကာလရှညျတဈခုမှာ ကာလတိုအပိုငျးအခွားလေးတှနေဲ့ လလေ့ာဖို့ စီစဉျပါ။
ကိုယျ သငျယူဖို့ကွိုးစားနတေဲ့ စှမျးရညျကို ကြှမျးကငျြပွီးသားသူတှဆေီက အကူအညီတောငျးခံဖို့ မကွောကျပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတတှနေဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ဝမြှေပေးခငျြတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ သို့မဟုတျ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပေးမယျ့သူတဈယောကျရှိတာက တနျဖိုးရှိပါတယျ။ သူတို့က ကိုယျ့ရဲ့ သငျယူခွငျးမှာ အကွံပွုခကျြပေးနိုငျပွီး အခကျြအလကျပိုငျးမှာရော၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာပါ အထောကျအပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။ ပွီးတော့ စှမျးရညျကို လငျြလငျြမွနျမွနျရရှိစမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေိုလညျး သငျယူနိုငျအောငျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
၉။ ကိုယျ့ရဲ့ စှမျးရညျတှကေို အသုံးခပြါ။
သငျယူထားတဲ့အရာတှကေို အသုံးပွုပွီး တကယျ့ဘဝရဲ့ ပွဿနာတှကေို ဖွရှေငျးတယျဆိုရငျ ပိုပွီး မွနျမွနျဆနျဆနျသငျယူနိုငျပါတယျ။
လူတိုငျးမှာ သငျယူပုံနညျးလမျးတှကေ မတူညီကွပါဘူး။ အမှားလုပျမိမှာကို မကွောကျပါနဲ့။ ဘယျအရာတှကေ ကိုယျ့အတှကျ အလုပျဖွဈသလဲဆိုတာကို စမျးသပျလုပျဆောငျပါ။
စှမျးရညျအသဈတဈခုကို သငျယူခွငျးက ကိုယျ့ကိုယျ ပိုပွီးပြျောရှငျအောငျ၊ ပိုပွီးယုံကွညျခကျြရှိလာအောငျ ဖွဈစရေုံသာမက အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးအသဈတှအေတှကျ လမျးပှငျ့စပွေီး ကိုယျ့ဦးနှောကျကိုလညျး ပွောငျးလဲစတေဲ့အတှကျ အခြိနျကာလတဈခုအတှငျးမှာ စှမျးရညျအသဈတှကေို မွနျမွနျဆနျဆနျသငျယူနိုငျပွီး မှတျဉာဏျ၊ အပွောစှမျးရညျနဲ့ ဘာသာစကားစှမျးရညျတှကေို တိုးတကျစနေိုငျပါတယျ။ ၂၁ ရာစုအလုပျခှငျအတှကျ တနျဖိုးရှိတဲ့ စှမျးရညျအသဈတှကေို ရရှိဖို့က အမွဲတမျးမလှယျကူဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒါပမေဲ့ စှဲစှဲမွဲမွဲလုပျဆောငျမယျဆိုရငျ ရရှိလာမယျ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေ ထိုကျတနျပါတယျ။
မ Ada Chai က နယျသာလနျနိုငျငံမှာ ရုံးခြုပျတညျရှိတဲ့ Accelerator ပရိုဂရမျ Rockstart Myanmar မှာ အလုပျလုပျကိုငျနပေါတယျ။ အရငျက Thalun International School မှာ Preschool Teacher အနနေဲ့ လုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ လျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးမှာ အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် စွမ်းရည်အသစ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် လူတော်တော်များများက ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်ရေးရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်ကြပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် ရောင်းကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူရောင်းထွက်နိုင်စေမယ့် စွမ်းရည်တွေတည်ဆောက်ရေးမှာ သူတို့ရဲ့အချိန်တွေ၊ ငွေတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတတွေကို အချိန်နဲ့အမျှ အချက်အလက်တွေကို ထပ်ထပ်ဖြည့်ဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။
ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်အသစ်တစ်ခုကို သင်ယူဖို့ကြိုးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်တွေ တိုးတက်ဖို့လုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် စွမ်းရည်အသစ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်လာစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို Wynee က အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်သင်ယူချင်တဲ့ စွမ်းရည်ဟာ အဖိုးတန်ပြီး ရယူနိုင်တာဖြစ်ပါစေ။
ကိုယ့်အလုပ်အတွက် သင့်လျော်ပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းက တန်ဖိုးထားတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ် တန်ဖိုးတက်စေပြီး အလုပ်ခွင်မှာ ပိုပြီးအကျိုးရှိစေဖို့ သင်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့ စွမ်းရည်တွေကို သိအောင်လုပ်ပါ။ ရယူနိုင်မယ့်ပန်းတိုင်ကို ချမှတ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းမှာ ထိုစွမ်းရည်ကို တကယ်သင်ယူနိုင်မလား၊ အဲဒီအတွက် အချိန်တွေ၊ အင်အားတွေပေးနိုင်မလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးပါ။
၂။ ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိပြီး သင်ယူခြင်းပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စူးစိုက်ပါ။
အောင်မြင်တဲ့သူတွေက သူတို့ရဲ့အချိ်န်နဲ့ စွမ်းအင်တွေကို လိုအပ်တဲ့စွမ်းရည်တွေရရှိဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ စည်းကမ်းနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုက စွမ်းရည်အသစ်တစ်ခုရရှိဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးပါပါတယ်။ တီဗီရှေ့မှာနဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ဆုံးမယ့်အစား အချိန်ဇယားချပြီး အဲဒီအတိုင်းလိုက်နာပါ။
၃။ ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါစေ။
ကိုယ် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သင်ယူမှုပုံစံက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိပ္ပါယ်ဖော်နိုင်ခြင်းက လူတွေကို နားလည်အောင်နဲ့ သင်ယူနိုင်အောင် ကူညီပေးတယ်လို့ သုတေသနက ဆိုပါတယ်။ အလွတ်ကျက်မှတ်လိုက်တာထက် တကယ့်ဘ၀နဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်ပြီး သဘောတရားတွေက အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများနဲ့ ဘယ်လိုကိုက်ညီလဲဆိုတာ နားလည်ပါ။ အကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုကို သင်ယူတဲ့အခါ ပိုပြီးစွဲမြဲစေဖို့ အရင်က ဗဟုသုတတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရပါ။
၄။ သေးငယ်တဲ့အရာတွေကနေ စတင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါစေ။
စွမ်းရည်အသစ်တွေအများကြီးကို တစ်ခါတည်းသင်ယူဖို့ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလွန်အကျွံတွန်းအားပေးတယ်ဆိုရင် ၀န်ပိပြီး ပင်ပန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အချိန်တစ်ချိန်မှာ စွမ်းရည်တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက်ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး တစ်ခုစီကို ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင်လေးတွေဖြစ်အောင် သတ်မှတ်ပါ။ စွမ်းရည်တွေကို အနည်းဆုံးသင်ယူနိုင်မယ့်အနေအထားတွေအထိ ပိုင်းခြားပြီး အချိန်တစ်ချိန်မှာ တစ်ခုနှုန်းနဲ့ သင်ယူနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ်က ရှေ့ကို ဆက်လက်တက်လှမ်းနေသရွေ့ သေးငယ်တဲ့အဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်တာက အဆင်ပြေပါတယ်။
၅။ တခြားသူတွေကို သင်ပေးပါ။
တခြားသူတွေ သင်ယူနိုင်ဖို့ကူညီတာက ကိုယ့်ဘာသာ ကောင်းကောင်းသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ တခြားသူတွေကို သင်ကြားပေးတာက ကိုယ့်အနေနဲ့ သင်ထားပြီးသားအရာတွေကို ပြန်လည်အမှတ်ရပြီး လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖော်အသင်းဖက်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်သင်ယူထားတဲ့အရာတွေ ဝေမျှပေးနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေရအောင်ယူပါ။
စွမ်းရည်အသစ်တစ်ခုကို တစ်ညတည်းနဲ့ သင်ယူလို့မရပါဘူး။ စွမ်းရည်တစ်ခုကို သင်ယူဖို့ လတွေကြာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ရှည်ပါ၊ ဇွဲရှိပါ။
၇။ ကိုယ့်ရဲ့ သင်ယူခြင်းတွေကို အချိန်ကာလတစ်ခုထိလုပ်ဆောင်ပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ အချိန်ကြာကြာလေ့လာမှု၊ သို့မဟုတ် အချိန်ကာလတစ်ခုထိ သင်ယူခြင်းကို လုပ်ဆောင်တာက အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ အများကြီးသင်ယူတာထက် ပိုကောင်းတဲ့ သင်ယူခြင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကာလတစ်ခုထိ လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တာက သင်ယူတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အာရုံကြောကလာပ်စည်းတွေကြားက အချိတ်အဆက်လေးတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အချက်အလက်တွေအများကြီးကို အကြာကြီးမှတ်မိစေပါတယ်။ တစ်ရက်ထဲမှာ နာရီပေါင်းများစွာ ထိုင်ပြီးလေ့လာမယ့်အစား အချိန်ကာလရှည်တစ်ခုမှာ ကာလတိုအပိုင်းအခြားလေးတွေနဲ့ လေ့လာဖို့ စီစဉ်ပါ။
ကိုယ် သင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ စွမ်းရည်ကို ကျွမ်းကျင်ပြီးသားသူတွေဆီက အကူအညီတောင်းခံဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးချင်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးမယ့်သူတစ်ယောက်ရှိတာက တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ သူတို့က ကိုယ့်ရဲ့ သင်ယူခြင်းမှာ အကြံပြုချက်ပေးနိုင်ပြီး အချက်အလက်ပိုင်းမှာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါ အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စွမ်းရည်ကို လျင်လျင်မြန်မြန်ရရှိစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုလည်း သင်ယူနိုင်အောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၉။ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို အသုံးချပါ။
သင်ယူထားတဲ့အရာတွေကို အသုံးပြုပြီး တကယ့်ဘ၀ရဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတယ်ဆိုရင် ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ သင်ယူပုံနည်းလမ်းတွေက မတူညီကြပါဘူး။ အမှားလုပ်မိမှာကို မကြောက်ပါနဲ့။ ဘယ်အရာတွေက ကိုယ့်အတွက် အလုပ်ဖြစ်သလဲဆိုတာကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ပါ။
စွမ်းရည်အသစ်တစ်ခုကို သင်ယူခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ် ပိုပြီးပျော်ရွှင်အောင်၊ ပိုပြီးယုံကြည်ချက်ရှိလာအောင် ဖြစ်စေရုံသာမက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေအတွက် လမ်းပွင့်စေပြီး ကိုယ့်ဦးနှောက်ကိုလည်း ပြောင်းလဲစေတဲ့အတွက် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ စွမ်းရည်အသစ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူနိုင်ပြီး မှတ်ဥာဏ်၊ အပြောစွမ်းရည်နဲ့ ဘာသာစကားစွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုအလုပ်ခွင်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စွမ်းရည်အသစ်တွေကို ရရှိဖို့က အမြဲတမ်းမလွယ်ကူဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။ ဒါပေမဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက ထိုက်တန်ပါတယ်။
မ Ada Chai က နယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ ရုံးချုပ်တည်ရှိတဲ့ Accelerator ပရိုဂရမ် Rockstart Myanmar မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အရင်က Thalun International School မှာ Preschool Teacher အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
If you want to thrive in today’s fast-paced global economy, the ability to pick up new skills quickly isasin qua non. Many now understand the necessity of self-improvement and are constantly striving to update their knowledge, investing their time and money into building up an arsenal of skills that will make them more marketable.
Whether you are trying to learnanew computer program or working on improving your interpersonal communication skills, Wynee provides the following tips to masteranew skill: 1. Make sure the skill you want to learn is valued and attainable.
Be sure to chooseaskill that is relevant to your work and is valued by your organization. Identify what skills you need to learn to add value and be more effective in the workplace but do make sure that you are setting an achievable goal. Ask yourself if you will realistically be able to learn this skill in the given time frame and if you will be able to devote the time and energy it will require.
2. Be committed and dedicate yourself to learning.
Successful people commit their time and energy to acquiring the skills they need. Discipline and hard work are vital to gaininganew skill. Setaschedule and follow it instead of wasting your time beingavegetable in front of the TV or scrolling social media.
3. Make it meaningful to you.
Regardless of your preferred learning style, research has shown that it is creating meaning that helps people to understand and learn. Rather than memorizing, be sure to make real life connections and understand how concepts fits into the larger scheme of things. Bring in prior knowledge and your personal experiences when learning something new to make it stick!
4. Start small and keep it manageable.
You may feel overwhelmed and burnout if you are trying to learn may new skills at once or pushing yourself too hard. Focus on one or two skills atatime and break each one down into manageable goals. Deconstruct the skill to the minimum learnable units and tackle them one atatime. It’s alright to take small steps, as long as you keep moving forward!
5. Teach it to others.
We can help ourselves learn better by helping others to learn. Teaching others will give youachance to practice and recall what you’ve learned so take the opportunity to share what you are learning with your teammates, colleagues, or friends!
You won’t learn acquireanew skill overnight. It will take months for you to learn the skill so be patient and persistent.
7. Spread out your learning.
Studies have shown that distributed practice, or spreading out learning over time, isamuch better way to learning than binge-learning and cramming. Distributed practice helps stimulate the links between neurons that are formed when we learn and helps us to retain more information. Instead of sitting down for many hoursaday, plan to have shorter sessions acrossalonger period of time.
Don’t be afraid to ask for help from someone who has already mastered the skill that you are working on. Findingamentor oraco-worker who is willing to share their knowledge and experience with you is invaluable. They may also be able to provide feedback on your learning, offer informational or emotional support, and help you learn some tricks to acquire the skill more quickly.
9. Apply your skills!
When we use what we learn and use it to solve real-world problems, we learn more quickly.
Everyone hasadifferent way of learning. Don’t be afraid to make mistakes and experiment with what works for you!
Learninganew skill not only makes you happier and more confident, but it will also open up new career opportunities and change your brain so that you can learn new skills faster over time and improve your working memory, verbal intelligence, and language skills. Remember that to gain valuable new skills for the 21st century workplace won’t always beapiece of cake but if you stick with it, the benefits are worth it.
Ma Ada Chai works at Rockstart Myanmar, an accelerator program headquartered in Netherlands. Previously, she worked asapreschool teacher in Thalun International School.